IGeofumadas - mayelana namathrendi alo mzuzu wedijithali - iGeofumadas
Ephreli, 2020 egeomates yami
Ukuya Kwedijithali Kungaguqula kanjani Izinselelo Zakho Zobunjiniyela
Izindawo ezixhumekile zedatha azikhulumi ngakho kuphela, zihamba nomgwaqo kumaphrojekthi akho okwakha.
Cishe bonke ochwepheshe kwezobunjiniyela, bezokwakha nokwakha (AEC) bagxile ekutholeni izindlela ezintsha zokwandisa imishado nokunciphisa ukuziphendulela kumabhizinisi abo. Ngoba ubuchwepheshe buhamba ngokushesha okukhulu, kungaba nzima ngoba miningi imithombo yolwazi etholakalayo. Kuba yindaba yokwenza isikhathi sokuyisebenzisa.
Kepha kuhlobana kanjani nemakethe yethu yansuku zonke? Omunye uzakwethu uthole i-imeyili ethakazelisa kakhulu evela kwiklayenti lomnini-ophethe athi:
"Inselelo enkulu esinayo ukuthi osonkontileka babonakala bekhuluma ngesikhathi kunikezwa inkontileka, kepha ukusebenza kwayo bese kuyama, ngoba akuyona into ebaluleke kakhulu emaqenjini amaphrojekthi. Njengonjiniyela wokuphathelene, sifuna ukuba ngumqambi futhi sibambisane nosonkontileka abazoba ngabokuqala ukwamukela futhi babe nekhono lokukhulula. ”
Kunzima ukuthola ukuthi yini okusha ukwakhiwa okunikeza kulezi zinsuku. Ingabe i-terabyte yedatha, enikezwe iklayenti ngaphandle kwedatha yomlando noma imethadatha enamathiselwe? ibhuku lokwakha imishini yasekuqaleni elinezithombe; noma imidwebo nedatha engahle ihambisane nempahla enikeziwe njengoba yakhiwe / yagcina?
Uhlelo oluhlangene, njenge-ProjectWise ne-AssetWise, kumele lube ngumnikazi wempahla yanoma yiluphi uhlobo lwephrojekthi. Njengoba ngifundile emaNdabeni 3 no-4 alolu chungechunge (Ukuthi umthombo owodwa weqiniso ungaguqula kanjani imboni yokwakhiwa kwengqalasizinda nokuthi kungani idinga ukulungisa inqubo yokuqamba, ngokulandelana), kungcono ukubandakanya uhlelo ngaphambi kokuba kudale kakhulu.
Kunezinhlelo eziningi emakethe, futhi azikho ezilingana zonke. Isibonelo, uma unamaphrojekthi amakhulu wengqalasizinda, udinga ukucabanga ngokuqina. Awufuni inkinga ukuthi iqhubeke, kusuka ekwakhiweni kuya ekwakhiweni kuya ekusebenzeni. Amaklayenti ambalwa engisebenza nawo asondela kule nkinga evela ekhoneni elihluke ngokuphelele. Bayibiza ngokuthi "ukubuyisela emuva ubunjiniyela inkinga."
Uma ufuna ukunqoba kwesikhashana nje, uzogcina usene-data emnyama, okungezinye zezinkinga. Njengekhasimende, ufuna ukuthi iphrojekthi yakho ithobele ngokuphelele i-BIM.
Abanini bomsebenzi bazibuza le mibuzo emithathu:
Yini engiyidingayo ukuphatha impahla, ikakhulukazi ngoba yingxenye ende yomjikelezo wempilo yeprojekthi?
Yini engiyidingayo ukuze kwakhiwe, futhi lokho kuhlangene nokuphathwa kwempahla?
Yini engiyidingayo ngesikhathi sokuqanjwa kanye nokwenzeka, futhi okuhambisana nesoftware yokuphathwa kweprojekthi?
Ukufika lapho, udinga i-CDE: imvelo yedatha exhunyiwe,
Akuyona indawo evamile yedatha.
Zombili lezi zinhlelo zishintshanisa idatha kwiphrojekthi, kepha Imvelo yeDatha exhunyiwe (i-CDE) ukuphela komthombo weqiniso ofanelekile. I-CDE izophatha, ihlakaze, iqoqe futhi igcine imininingwane yonke impilo yephrojekthi. Le mpilo ewusizo ingaba yinde kakhulu kunendlela abantu abacabanga ngayo, ikakhulukazi uma ubheka inani lokuvuselelwa kwempahla impahla engadlula esikhathini esiyiminyaka engama-30. Ngokuyisisekelo, i-BIM iqinisekisa ukuthi lonke ulwazi olufanele luyatholakala ngefomethi efanelekile, ivumela iqembu ukuthi lenze ukhetho olufanele kukho konke impilo yefa. Umbono ongaqondile, ikakhulukazi ezinsukwini zokuqala, ukuthi iBIM yayimalungana nokwakha imodeli ye-3D ezimele. Lokhu akulona iqiniso. Esikhundleni salokho, i-BIM ngokuyisisekelo indlela ukusethwa kwephrojekthi nokusebenza ngayo.
Esikhungweni se-BIM kunesibopho esibalulekile: izidingo zolwazi zomqashi. Lezi zidingo zichaza imininingwane umqashi afuna ukuyithuthukisa ukwenza impahla. Umqashi usungula idokhumenti yesivumelwano ekuqaleni, aqinisekise ukuthi imininingwane efanelekile iyakhiwa nokuthi amasystem asetshenziswa kuyo yonke iphrojekthi.
Uma sikhuluma nge-CDE, ithemu elilandelayo esidinga ukulichaza lingamawele ledijithali, okuwuphawu lwedijithali lwempahla ebonakalayo, inqubo noma uhlelo, kanye nemininingwane yobunjiniyela esivumela ukuthi siqonde futhi silinganise ukusebenza kwayo. Imvamisa, amawele ledijithali angavuselelwa njalo kusuka emithonjeni eminingi, kufaka phakathi izinzwa nokuhlola okuqhubekayo, ukumela isimo sayo, isimo sokusebenza, noma isikhundla eduze nesikhathi sangempela. Amawele ledijithali avumela abasebenzisi ukuthi babuke impahla, isimo sokuhlola, ukuhlaziya, kanye nokuqonda kwengqondo ukubikezela nokwenza kahle ukusebenza kwempahla.
Amawele ledijithali asetshenziswa njengendlela yokwengeza ukusebenza nokugcinwa kwempahla yangempela, kufaka phakathi izinqubo nezinqubo zazo. Njengoba imininingwane evela kumawele ledijithali ihlaziywa, izifundo eziningi zingafundwa, kunikeza iqembu ithuba lokubuyisa inani eliphakeme lempahla yangempela.
Izifundo zingafundwa ngokusetshenziswa kwedijithali ukubona ukuthi yisiphi isikhathi esifanele sokulungisa imishini ngaphandle kokuthinta ukusebenza kwempahla. Lapho ufaka ukungezwa kwezinzwa nobuhlakani bokufakelwa, uthola ukuhlaziya kwedatha yesikhathi sangempela kanye nokuqhathanisa le datha nedatha yomlando.
Ngokusho Kwezimiso Ze-Gemini ezishicilelwe yiCentre for Digitally Constructed Britain ngoDisemba 2018, amawele idijithali "abonakaliswa ngokwedijithali kwento ebonakalayo." Okuhlukanisa amawele ledijithali kunoma iyiphi enye imodeli yedijithali ukuxhumana kwayo ngamawele wenyama. " I-National Digital Twin ichazwa ngokuthi "i-ecosystem yamawele ledijithali axhumeke ngokuphephile ngemininingwane eyabiwe."
Uma ngibheka emuva ku-imeyili uzakwethu engimtholile evela kumakhasimende ophethe umnikazi, kuyacaca ukuthi izinhlangano zifuna ukuhlanganisa okuningi ngangokunokwenzeka kupulatifomu eyodwa esekelwe ifu.
Akuwona nje kuphela ama-silos wendawo emininingwane eyimpinda ayisusiwe, adala nekhono lokuvula ulwazi oluya ezingeni elisha elinamandla lokusebenza.
Ama-CDE adlala indima enkulu ekuxhumeni izindlela ezinhle kakhulu nokuhamba komsebenzi wesivumelwano embonini yezokwakha. Lezi yisisekelo sama-cufflink wedijithali.
Kungani imininingwane yokwakhiwa engakhiwanga kahle ibiza amaphrojekthi akho
Amaphrojekthi wokwakha aya ngokuya eba yinkimbinkimbi kanti nekhambi liwukuthi imvelo yedatha exhunyiwe.
Ngemuva kokuchitha impelasonto yomndeni nomngane kanjiniyela onenkinga enkulu ngephrojekthi yakamuva enkabeni yedolobha, lesi simo sangenza ngacabanga ukuthi izinkontileka zishintshe kanjani futhi zizoshintsha ngenxa yokuxineka nokutholakala kwe idatha. Mina nomngane wami sichithe impelasonto sixoxa ngemiklamo yokwakha neyokwakha. Ukusetha lesi sehlakalo, amapharamitha alesi sikimu esiqashiwe sangasese (PRS) ayeqonde ngqo.
Izinkinga zephrojekthi yomngane wami zizonke, zazibangelwa inani lokuphinde kwenziwe umsebenzi oludingekayo kanye nesibopho, ngoba kwakukhona uchungechunge lwezinguquko zokuqamba. Ngicabanga le projekthi, ngiqale ukuphenya ukuthi kungakanani ukusebenza kabusha kubiza imboni embonini.
Uma ufunda ezinye zezifundo zomhlaba wonke, le mibiko iphakamisa ukuthi izindleko eziqondile ezivela emaphutheni angagwemeka cishe ziyi-5% yenani lephrojekthi. Kusebenza lelo nani emakethe iyonke, leli phesenti lengeza cishe ku-GBP 5 billion (USD 6,1 billion) ngonyaka e-UK. Ngemuva kokunaka inani lezexwayiso zenzuzo ezikhishwayo, leli nani likhulu kunamazinga wenzuzo aphakathi iningi losonkontileka abasebenza ezimakethe zokuqala.
Ukucwaninga okwenziwa yi-Get It Right Initiative (GIRI) ngonyaka ka-2015 kukhombisa inani eliphakeme ngokumangazayo. AbakwaGIRI baphume ezingxoxweni kwi-Best Practices Panel ye-Institution of Civil engineers. Lapho kufaka phakathi izindleko ezingakacoliswanga nezingaqondile, i-GIRI ilinganisela inani elizoba phakathi kwe-10% ne-25% yezindleko zephrojekthi, cishe ama-10-25 ezigidigidi ze-GBP (12-30 billion USD) ngonyaka.
Uphenyo lukaGIRI luveze izimbangela eziyishumi eziphezulu zephutha, obekungukuthi:
Izinguquko zomklamo ngemuva kwesikhathi
Imininingwane eyakhiwe kabi yokwakhiwa
Isiko elibi maqondana nekhwalithi.
Imininingwane ehlelwe kahle yomklamo
Ukunakekelwa okunganele ekwakhiweni kwezakhiwo.
Ingcindezi ethe xaxa yokuhweba (yezezimali nesikhathi)
Ukuphathwa okungalungile nokuklama isikhombimsebenzisi
Ukuxhumana okungasebenzi phakathi kwamalungu eqembu.
Amakhono okugada awenele
Ngithole isihloko sokuphathwa kwemiklamo sithakazelisa. Uphenyo lwe-GIRI luveze ukuthi kunokuntengantenga komklamo ohleliwe, okuholele ekutheni kube nokushayisana phakathi kwehhovisi lokuklama ne-supply chain esakhiweni, okuholele ekuhleleni kabusha, ekubambezelweni nasekukhuleni kwezindleko.
Kodwa-ke, kukhona isisombululo esilula ezinkingeni eziningi eziqokonyisiwe embikweni we-GIRI: ubuchwepheshe obusetshenziswe ngamafu. Amasistimu afana ne-ProjectWise ne-SYNCHRO anganciphisa eziningi zalezi zinkinga ngokunikeza:
Isimo sezulu sokubambisana esiphephile nesiphephile lapho imibhalo, takhiwo, kanye namamodeli kungabuyekezwa kusayithi kusetshenziswa amadivayisi eselula, afana nomakhalekhukhwini.
Amandla okulandela umkhondo futhi ngaphandle komthungo aqinisekise ukuthi izinto zokwakha ezizofika ngokuqondile zizofika esizeni ngqo kusuka efektri.
Amasistimu anganikela ngohlu lokuhlola kanye ne-crystallization Ukuqinisekisa ukuthi iphrojekthi ihamba ngendlela efanele.
Kodwa-ke, njengoba sibonile ocwaningweni lwakamuva luka-44.3 (okuxoxwe ngalo esihlokweni sami esedlule Vula Izinzuzo Zokuhamba Kwidijithali Kwezokwakha), nokho, izinkontileka eziningi azisebenzisi lobu buchwepheshe ukuze zibasize. Inhlolovo kaPotor ithole ukuthi cishe ingxenye yezinkampani (XNUMX%) ibinombono olinganiselwe noma ongenankinga ngokusebenza kwenkampani noma yephrojekthi. Yize isigamu sabaphendulayo sikuqonda kahle ukubaluleka kokuqoqa idatha yephrojekthi, abakwazanga ukuyisebenzisa ngokunenzuzo. Izinkampani ezingasebenzisi uhlelo lwe-ProjectWise ziphuthelwa:
Ukusheshisa ukuhamba komsebenzi kanye nokuklama
Onjiniyela balinganiselwa ukuthi basebenzise u-40% wosuku lwabo bafuna imininingwane noma balinde ukulandwa kwamafayela. Cabanga ukunikeza wonke umuntu ukufinyelela okusheshayo kwedatha efanelekile ukuthi iludinga nini futhi kuphi.
Ukusebenzisana ngaphandle kwesiphithiphithi
Hlela amaqembu akho endaweni yedatha exhunyiwe ukunciphisa iziphazamiso zokuxhumana. Thola ukubuka okuphelele kwayo yonke imininingwane nokuncika ukuze wonke umuntu abe nemininingwane yakamuva.
Thola ukuzethemba nokulawula efwini
Xhuma ithimba lakho lephrojekthi kanye ne-chain chain ngezinsizakalo zefu. Yehlisa izithiyo ze-IT, izingqinamba zokusebenza kwe-WAN okuhamba kancane, ukukhubazeka nokuphepha kwedatha.
Ekugcineni, mina nomngane wami savuma, ngebhodlela elimnandi le-porto, ukuthi indlela engcono yokugwema ukuphindisela okubizayo ngokuzenza izilinganiso zibe yidijithali. Ngaphandle kobuchwepheshe bezinombolo, amaphrojekthi azodlala isikhathi esibalulekile (futhi ngenxa yalokho izindleko zokufika) eza nokuhamba kwezinguquko zomklamo
Kungani udinga ukuthola inqubo efanele yokwakhiwa
Umthombo owodwa weqiniso ikwazi ukwengeza inqubo yakho yokuqamba ukulethwa kangcono kwephrojekthi.
Njengabahambi abaningi, ngihamba eLondon ngidlula e-Euston. Ngezinhlelo zokwakha amamayela angama-330 emizila emisha esanda kusungulwa, iphrojekthi ibangele ukuphazamiseka okuncane kakhulu ohambweni lwami kuze kube manje. Njengoba iphrojekthi isebenzisa iPortWiseWise yakwa-XNUMX, ngike ngazibuza ukuthi bekulokhu kwenzekani ngemuva kwezindonga zokwakha.
Kuvela ukuthi kunamathuna amakhulu anezinsalela zabantu ezingaphezu kuka-40,000 lapho izinkundla zika-Euston ze-HS2 zizozinza khona ngolunye usuku. Okwake kwaba yiSt James 'Gardens Cemetery kungekudala kuzoba isango lapho izitimela zishiya eLondon futhi abagibeli bangahamba baye ku-225 mph.
Ukulandelela izinsalela zabantu ezingama-40,000 kubukeka njengomsebenzi olula wale phrojekthi epic kuqhathaniswa nokwakha isango laseLondon ku-HS2. Lapho iqembu lokulethwa lithuthuka lithuthuka, kancane kancane bazothuthukisa ukuqonda kwezidingo zokuklama ezisungulwe yikhasimende nethimba lokuklama ukuze lihlangabezane nohlaka lwangempela lokuqamba, kubandakanya nefomu nomsebenzi weprojekthi.
Njengoba ngibe yisihambi esime esiteshini samanje se-Euston, ngifuna ukubuka iphaneli yolwazi futhi ngilangazelela ukuthi isitimela esibambezelekile sinikezwe ipulatifomu, ngiyazi kuqala ukuthi lungakanani ushintsho oludingekayo ukuze isiteshi sisebenze kahle.
Ngalesi sikhathi, iqembu lokulethwa lizosebenzisana nethimba lokuklama ukuvela futhi linwebe okudingekayo ukuze kube yincazelo ejulile yomdwebo nokwakha.
Njengoba wonke amaqembu eqhubekela phambili, kuzolile ngaphambi kwesivunguvungu, ngaphambi kwamagagasi e-choppy noshintsho nokuhlukahluka kwendlela. Ukulungiswa kabusha kwedizayini, izingqinamba nesikweletu kungadala ukungezwani phakathi kwethimba lokuklama neqembu lokulethwa.
Lokhu kubuyekezwa kuthatha isikhathi eside ukuthi iqembu lidale futhi liqophe, kanye nokukhungatheka ukubukeze, kuvume, futhi kufundise ukulethwa kokulethwa kokulethwa.
Uma sibuyela emuva ekuqaleni kwanoma iyiphi iphrojekthi, hhayi nje iphrojekthi enkulu yengqalasizinda, ikhasimende lizosebenzisana nethimba lokuklama bese lisungula isifinyezo salokho iphrojekthi edinga ukuletha. Kulesosifinyezo, ikhasimende lizosungula ukusebenza okhiye kanye nezidingo ezimbalwa, okumele ukwakheka kwazo kuhlangane nazo.
Lokhu kuxhumana nekhasimende kuzolandela lezi zinyathelo ezine:
Isigaba sokuhlela / sangaphambi kokuqamba
Imidwebo yokwakha / ihluzo
Ngisakhumbula lapho ngiqala ebhizinisini lokwakha. Emuva ngaleso sikhathi, lokhu kuhlangana kwamakhasimende ngabe kwenzeka ngephepha, iphunga le-ammonia elivela kubakopishi laligcwalisa igumbi njengoba belungisa amaphakheji futhi bawaphula ngaphansi kwezimo ezidingekayo. Namuhla, yimodeli kanye nedatha ye-3D engenza izinto zibe nzima kakhulu.
Kodwa-ke, kukhona ikhambi lokugwema lezi zingqinamba. I-software efana ne-ProjectWise ne-SYNCHRO ivumela ithimba lokuklama ukwakha ku-3D ngaphambi kokwakha nokusabalalisa leyo datha ngendlela elawulwayo nenokubambisana. Lo mkhuba awuthuthukisi kuphela ukuxhumana phakathi kwababambe iqhaza nethimba lonke lokuklama, kodwa futhi unganciphisa nengcindezi yokungafani okukhona kuphrojekthi ngayinye. Siyazi ezifundweni zethu, kanye nalezo ezenziwa yizinkampani ezinjengeMcKinsey, ukuthi ama-20% amaphrojekthi amakhulu ayachichima futhi ama-80% adlula isabelozimali.
Isidingo sokulawula nokunciphisa lokhu kuhluka kubalulekile.
Uma kwenziwa amaphutha wokuqamba, izinhlelo zamanje zenza kube lula ukulungisa lelo phutha. Isibonakaliso esibalulekile ukuthi izinguquko nolwazi zabiwe ngokushesha, okuvumela iqembu lokulethwa kanye neqoqo lokuhlinzekwa kwalo ukuba lisabele ngendlela ebangela umthelela omncane esizeni.
Uma sibheka umbiko wakamuva woMnyango Wezemvelo, Ukudla kanye Nezindawo zasemakhaya (i-DEFRA), imfucuza yokwakha ihlala iphakeme kakhulu futhi iningi livela ekuhleleni kabusha umsebenzi. Lo mkhuba ekugcineni uzogcina imali, isikhathi nezinto zokwakha.
UMott MacDonald wabona lezi zinzuzo lapho esebenza ngomthombo owodwa weqiniso ngomsebenzi wakhe eThames Tideway East Project. Njengomklami oholayo, le nhlangano ibikade ihlose ukuthuthukisa uhlelo olusha lwamanzi okuphehlwa kwendle eLondon. Ngaphezu kokuphatha iphrojekthi eyinkimbinkimbi ye- $ 4.000bn ($ 4.900bn), iMott MacDonald inselelo yokuthi uyihambise iminyaka emibili ngaphambi kokwenza isikhathi. Kodwa-ke, uma le nhlangano ingakwazanga ukuvumela ukusebenzisana okungenasisekelo kulo lonke ithimba leprojekthi eluliwe, yafaka engcupheni yokubuyela emuva futhi yehluleke ukuhlangabezana nezikhathi ezibalulekile.
Ukuze uphumelele, iMott MacDonald bekufanele iqinisekise ukuthi lonke ithimba lakhe lephrojekthi, elihlanganisa amalungu ahlukahlukene ezinhlangano, izindlela zokuqamba, kanye nezindawo, angafinyelela kalula futhi ashintshisane ngolwazi olusha endaweni ephethwe ngayo. UMott MacDonald ufeze lesi sisombululo ngokuhlanganisa amalungu eqembu lakhe nokuklama okuqukethwe endaweni yedatha exhunyiwe. Amalungu eqembu emikhakheni eyakhiwe engu-12 manje angahle adale, aguqule futhi agcine izinkulungwane zokulethwa endaweni eyodwa, zitholakala kalula izinhlangano ezibamba iqhaza kulo lonke elaseYurophu, kufaka phakathi abathengi ngezibuyekezo nokuvunyelwa.
Ngokuhlela iphrojekthi ngokubambisana, i-Mott MacDonald ilethe ikhwalithi engcono kwikhasimende ngaphambi kokuhlela futhi yabona ukuthi kukhona:
Ama-32% okonga ngesikhathi sokuklama design
I-80% ukufinyelela ngokushesha kumadokhumenti nokuthembela kubo bonke ababambe iqhaza kwephrojekthi
Ukuvunyelwa okungu-76% kwephakeji lekhasimende okokuqala.
Njengoba amakhompyutha ekhipha ukucindezelwa kwezinhlelo zomklamo, izinhlelo zokusebenza ezifana neProjekthiWise ne-SYNCHRO zingakusiza ukuphatha kangcono imininingwane yephrojekthi ngokwakha umthombo owodwa weqiniso ukonga isikhathi futhi unciphise nengozi ngokuqinisekisa ukuthi ulwazi olusha lukhona Kulandelwe, kuphathwe futhi kufinyeleleke kuphrojekthi yakho. Ukusheshisa ukusebenzisana kweqembu nesoftware kusiza ukuqondanisa iqembu lakho nendawo yedatha exhunyiwe. Kuzothuthukisa umkhiqizo futhi uqinisekise ukuthi imininingwane iyalandelwa futhi iphethwe ngokuhamba komsebenzi ngokubambisana.
Ukuphathwa kwamaphrojekthi okungcono kungaholela ekuqondeni okungcono izinqumo ezenziwa ngesikhathi esifanele futhi ezinolwazi. Izokuvumela ukuthi unqobe izithiyo ezingenzeka kuphrojekthi ngenkathi ikhulisa ukuvela kwayo okuphelele. Ngemuva kombiko wakamuva weCrossrail ovela kuCommons Public Accounts Committee ukugxekile ukuphathwa kosonkontileka ngalo msebenzi, kucacile ukuthi kunesidingo esikhulu sokucaciswa kwawo wonke amaphrojekthi, kufaka phakathi esiteshini esisha sesitimela i-Euston kanye ne-HS2 .
Umthombo owodwa weqiniso ungaguqula kanjani imboni yokwakhiwa kwengqalasizinda
Ngokokufaka okuningi nezinzwa zemininingwane eminingi, akukaze kubaluleke kakhulu ukuthi abaklami nosonkontileka basebenzise umthombo owodwa weqiniso.
Muva nje eNew York City, sifunde ukuthi ukwakhiwa kwamabhisikidi engilazi kungavinjelwa njengengxenye yemizamo yokunciphisa ukuphuma kwegreenhouse ngo-30%. IMeya uBill de Blasio ithe ama-skyscrapers abheke ingilazi "awasebenzi kahle" ngoba amandla amaningi ahamba ngengilazi.
UDe Blasio uhlela ukwethula umthethosivivinywa ozovimbela ukwakhiwa kwezindawo ezintsha zengilazi futhi udinga ukuthi izakhiwo ezikhona zengilazi zenziwe zanamuhla ukuze zihlangabezane nemihlahlandlela emisha yokuqina kwekhabhoni.
Ingcindezi yomphakathi wokuqamba manje inkulu kakhulu. Sibonile kaninginingi ukuthi amaphrojekthi wanamuhla okuqamba ayinkimbinkimbi futhi afuna kakhulu kunangaphambili. Kodwa-ke, ngezimeya zedolobha ziya ngokuya zikhuluma kakhulu ngokuqamba kanye nokusebenza, kufaka neMeya yaseLondon uSadiq Kan enqaba amapulani amasha wezikebhe eziklanywe ngabakwaFoster + Partner, abaklami kumele babuyele etafuleni. design ukuklama okungadingeki ngobuhle kuphela kepha futhi nakwezenhlalo nangokwemvelo
Ngomthethosivivinywa we-de Blasio ongabakhona, singabona ukwanda komhlaba wonke kwezinzwa kumaphrojekthi wethu, okuyizindaba ezinhle zamawele wedijithali kanye namawele okusebenza. Kodwa-ke, ulwazi oludingekayo yinqwaba lokuklama nethimba lokulethwa luqhubekele ngokuqinile ukuqapha ubuchwepheshe obusha. Njengoba la maprojekthi ekhula ngosayizi nokuyinkimbinkimbi, kanjalo nosayizi weqembu okulethwa ngalo. Ngokulandela yonke imidwebo, amaphakheji wolwazi angaba yinkimbinkimbi kakhulu kunephrojekthi ngokwayo.
Kunesidingo esikhulu sokuphathwa kokuqanjwa kwamaphrojekthi kusukela esigabeni sokuqala kwephrojekthi, okuvumela iqembu ukuthi lilawule ukukhishwa kokuhamba kolwazi. Ngenani elikhulu ledatha manje elixhunywe kuphrojekthi, kudingeka imithombo eyodwa yeqiniso eyenziwe kahle. Ungafunda kabanzi ngalezi zihloko ngokufunda ama-athikili ami edlule kuma-data silos (Kungani kufanele uvikele amasilayitha wedatha wokuqapha iphrojekthi ye-truer) nedatha enkulu (Digitizing nge-Big Idatha). Lo mthombo owodwa weqiniso kufanele uphathe konke ukuqhutshwa kweprojekhthi ngenkathi kuhambisaniswa nenqubo yenkontileka. Lokhu ukuhamba komsebenzi kuhlobene nesicelo sokushintsha noma ukuhluka okulula. Linye lalawa madokhumenti lizoba nomzila walo okufanele liwulandele nokuvalwa kwawo kuqediwe.
Imboni yezokwakha isivele icelwe ukuba idale indawo eyodwa yolwazi, umthombo owodwa weqiniso. E-UK, uhulumeni ufuna ukuthi lo mkhakha uhlinzeke ngemininingwane yedatha yegolide, okusho ukuthi isakhiwo ngasinye kumele sibe nerekhodi ledijithali yazo zonke izimpahla. Njengoba abantu abaningi eqenjini lokuklama nethimba lokulethwa bacelwa ukuba baqoqe idatha, indlela engcono kakhulu yokulawula leli nani ledatha ngokusebenzisa izilawuli zenkontileka ngokusebenzisa ukuqhutshwa komsebenzi okusobala nokuchazwe kahle.
Kusetshenziswa imvelo yedatha evulekile nexhunyiwe kuyimfanelo njengoba kuzonikeza iqembu ukusayinela olulodwa ukuphatha yonke idatha. Yilapho i-ProjectWise-based Bentley exhunywe Imvelo yedatha ingasiza ukulawula idatha bese inikezela ngomthombo owodwa weqiniso, ngenkathi ivumelana nezimo ngokwengeziwe ekusetshenzisweni kwansuku zonke.
Imvelo yedatha exhunyiwe ibalulekile kunoma iyiphi iphrojekthi. Yehlisa ukucindezela futhi inikeze iqembu ukufinyelela kulo lonke ulwazi oludingekayo, kungaba ngezinkinga zokuklama, ama-RFI, izicelo zokushintsha noma imibhalo yesivumelwano. Lolu lwazi lungabukwa njengeshidi le-PDF elilula noma njengemodeli ye-3D.
Kusetshenziswa ukuhanjiswa komsebenzi okusunguliwe, amalungu eqembu azobona ngokuzenzakalelayo ushintsho lokuklama oludingekayo kwinqubo yesinqumo, lubavumele ukuba benze leso sinqumo ngokushesha.
Kusebenzisa uhlelo olususelwa efwini kusho ukuthi iqembu linokufinyelela okuphelele kuyo yonke imibhalo, kungaba ngeselula esakhiweni noma kwikhompyutha yedeskithophu ehhovisi. Leli khono lenza wonke umuntu azi ngokuphelele ngentuthuko yephrojekthi.
Sebenzisa umthombo owodwa weqiniso kunciphisa inani lamaphutha lapho ususa idatha usuka ohlelweni uye kwelinye. Lesi sici sibuye sinciphise nesikhathi esisetshenziselwe ukuthola imininingwane efanele, sinciphise inani lokuphinda kudalwe amaphutha esizeni.
Ukuhamba komsebenzi okudingekayo kuzohluka ngephrojekthi, ngenxa yezidingo zesivumelwano nezicelo zokuxhumana namakhasimende. Ngakho-ke, ukudalwa kwalezi zisebenzi zokusebenzela kufanele kube lula futhi kuvumelane nezimo ukuze, njengenkampani, ungagcina isibopho sakho ngefomethi enengqondo. Kusebenzisa isistimu efana ne-ProjectWise kuzonikeza ukubonakala okungcono nokuhamba komsebenzi olawulwayo. Ngakho-ke, ngokunikeza idatha ebalulekile futhi ebalulekile, ukuqagela kanye nezingxabano kuzosuswa
Isibonelo senhlangano esebenzisa i-ProjectWise ukubonakala okungcono nokuhamba komsebenzi olawulwayo ukusebenzisana phakathi kweDragados SA neLondon Underground Limited.
Lezi zinhlangano zaziphethe ukuphatha iphrojekthi ye 6.07 billion GBP ($ 7.42 bhiliyoni) seBank-Monument Station, okungenye yezitimela eziyinkimbinkimbi kunazo zonke zomhlaba eUK.
Ukuze uphumelele, iDragados neLondon Underground bezidinga ukuphatha inethiwekhi enkulu yabalingani bephrojekthi, kufakwe abasebenzisi abangama-425 umuntu ngamunye Izinkampani ezahlukahlukene ezingama-30, ukuqinisekisa ukuthi izinkulungwane zemikhiqizo yokudalwa yadalwa, yahlolwa futhi yavunywa ngaphandle kwesigameko.
I-6.07 bil GBP (7.42 BIL USD)
IMINININGWANE YEMIHLA YOKUKHANYA KWADALWA, YADALWA YAYE YAMUKELWA NGAPHELA
Thatha ukuHlolwa kweDigital Digital bese ubona ukuthi ungathuthuka kanjani ebhizinisini lakho.
Umbhali | UMark Coates
Umqondisi Wezokumaketha Kwezimboni nokulethwa Kwephrojekthi
I-Systems yakwa-Bentley ngumhlinzeki ohola phambili wezisombululo zesoftware onjiniyela, abaklami, ochwepheshe bezokuma komhlaba, abakhi, nabaphathi bezindawo zokwakha ingqalasizinda, abakhi, kanye nemisebenzi. Ubunjiniyela be-MicroStation obusekelwe ku-XNUMX kanye ne-BIM, kanye nezinsizakalo zayo zeTwin Cloud, ukulethwa kweprojekthi kwangaphambili (ProjectWise) nokusebenza kwempahla (AssetWise) kwezokuhamba neminye imisebenzi yomphakathi, izinsiza kusebenza, izimboni zezimboni namandla izinsizakusebenza, kanye nezindawo zebhizinisi nezikhungo.
Abakwa-3,500 Systems basebenzisana nozakwabo abangaphezu kuka-700 170, bakhiqiza imali engenayo eyizigidi ezingama- $ 1 emazweni angama-2014, futhi batshala imali engaphezu kwezigidi eziyinkulungwane zamaRandi ocwaningweni, intuthuko, kanye nokutholwa kusukela ngo-1984. Kusukela yaqala ukwakhiwa ngo-XNUMX, le nkampani ihlale inabanikazi abaningi izelamani ezinhlanu ezasungulwa ngabakwaMorton. Amasheya we-Bentley aphethwe yisimemo emakethe yangasese ye-NASDAQ.
Thumela Previous«Langaphambilini Amadolobha edijithali - ukuthi singawasebenzisa kanjani ubuchwepheshe obunjengalokho okunikezwa yi-SIEMENS
Post Next I-Geomatics ne-Earth Science ngo-2050Okulandelayo »